OMN Exclusive Interview With President Isaias Afwerki Part 2 (April 10, 2017) |
April 10, 2017 in Oromia
RSWO – Ebla 09, 2017 ODUU FI DHAAMSA RSWO DHAGEEFFACHUU HIN DAGATINAA
One Response to OMN Exclusive Interview With President Isaias Afwerki Part 2 (April 10, 2017)
qero April 10, 2017 at 12:14 pm #
It is timely interview, thank you all.
Ummanii Oromo garu lenjii bassassetumaa fi lenjii warana iraatii cimmuu qaba. Yomiyuu callaa, Warii lenjii kana qabedaan hundiinuu lenjissuu irraatii jabaachuu qabedu. Ummaataa offii humenesuu jechuun kana, akkaa hundiinu qeyee issaa irraa dinnaa ittiisuu danda’uutii. Qeerrroon dalaagaaa kana hoganu irrattii cimaa, babalissaa ummaatta oromo giduutii. Oromon hundinuu biyaa issaatiif Loletuu fi basasetuu ta’uu qabaa.